जीतपछि बाबुराम, जनताले लगाएको गुन तिर्ने प्रतिबद्धता « Khasokhas Follow @khasokhasmag
जीतपछि बाबुराम, जनताले लगाएको गुन तिर्ने प्रतिबद्धता
गोरखा क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ जीत हासिल गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाली जनताले आफूप्रति अपार माया, सद्भाव र सहानुभूति देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जीतको नतिजा आउनासाथ लोकान्तर डट्कमसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता भट्टराईले गोर्खाली जनताले लगाएको गुन निःस्वार्थ भावले त्यहाँका जनताको भलाइको निम्ति काम गरेर तिर्ने बताए । गोरखामा विकास, निर्माण र त्यहाँका जनताको सुख, दुःखमा सधैं काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गोरखामा विभिन्न विकास निर्माणका काम शुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई अघि बढाउने अवसर र दायित्व फेरि प्राप्त भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘देशमा विकास र सुशासन कायम गर्न नयाँ शक्ति गठन भएको छ । त्यसलाई अघि बढाउन जनताले साथ दिनुभएको छ । त्यसप्रति गोर्खाली जनताप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।’
तपाईंका प्रतिद्वन्द्वी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गर्न कत्तिको कडा मिहिनेत गर्नुप–यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा डा. भट्टराईले उनी आफ्नो मित्र भएको र गोरखामा नआउन सुझाव दिएको स्मरण गरे ।
‘गोरखा तपाईंको कार्यक्षेत्र पनि होइन । जनतासँग भिजेर काम गर्नुपर्छ, अप्ेठरो पर्न सक्छ, तपाईं पनि चाहिने मित्र हो । गोरखामा चुनाव लड्न नआउनुस् भनेर सुझाव दिएको थिएँ । तैपनि उहाँ आउनुभयो,’ भट्टराईले थपे, ‘लोकतन्त्रमा हार÷जीत हुन्छ । यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन ।’
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर तपाईंविरुद्ध भिड्दा पनि चुनाव जित्नुभयो, अब गोरखामा कसैगरी कहिल्यै कसैले बाबुरामलाई हराउन सक्दैन भनेर बुझ्न सकिन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले लोकतन्त्रमा त्यस्तो दाबी गर्न नसकिने बताए ।
‘लोकतन्त्रमा हारजीत भइरहन्छ । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधि भनेका सही अर्थमा जनताका सेवक हुन् । जनताको सेवा आजीवन निःस्वार्थ भावले गर्नेछु,’ भट्टराईले भने ।
छोराछोरी युरोप र अमेरिका, वृद्धा आमाबुबाको यस्तो छ अबस्था
नारायण अधिकारी / छोराछोरी विदेश पयायन हुँदा वृद्धा साहाराविहीन बन्दै गएका छन् । शिक्षित र